Free internet- စာမျက်နှာ2- MYSTERY ZILLION
UBC ကို ဟက် တာတော. တွေ. ဘူးတယ်..
မင်းသား ကို အိမ်ခေါ် ထားရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်..ဟီး
5moive လည်:ကြည့်ချင်တယ် siim ကိုလည်: 15 လုန်းလောက် ပွားချင်တယ်..:P:P
ခဏနော်။ တစ်နေကုန် ဖိုရမ်းထဲမှာရှိနေလို့ Activity Award တွေတောင်ရနေပြီ။ :D:D
မလုပ်ပါနဲ့။ ဒေါ်ချင်ရင် လိပ်စာပြောထား။ ကားတင်ပြေးပြီးလာခဲ့မယ်:)):)):))
ရပါပြီ။ ဒီမှာယူပါ။ မသုံးဘူးသေးလို့ အသေးစိတ်မပြောတတ်ပါ။ သုံးပြီးရင် ပြန်ပြောပေးပါခင်ဗျား။
သက်တမ်းကုန်နေတဲ့ ၂ ပေ စလောင်း (RECEIVER+စလောင်း)-၁ စုံ
UPS ခပ်ကြီးကြီး (10 Watt လောက်ကို 16 နာရီလောက် On ထားနိုင်ရပါ့မယ်) တစ်ခု
၂ ပေစလောင်းကို ၄င်း UPS ကနေ ပါ၀ါပေးထားပါ။:5:
အဲဒီ့ Receiver နဲ့ MOV-5 ကိုရှာပါ။ အလွယ်တကူတွေ့ပါတယ်။:65:
ပြီးရင်တော့ အဲဒီ့ receiver ကို မီးမပျက်စေနဲ့တော့။:O
မီးပျက်သွားရင် သွားပြီ။ ပြန်ရှာဖို့ တော်တော်ခက်သွားပြီ။ မရတော့တာ။:((
Hi , mr,prince ,I am not going to try this free5movie as it is impossible to get 24/7 electricity in burma . but I am very interested in sim card..:39:
will you do it for me . I want to copy my daddy's handy . helpppp (:((:((:((
ok. I will report the result .
tomorrow , the day after tomorrow , ok ..times up! shoot !!!!!!!:67::67::67:
5 movie free ကြည့့်ဖို့က ၂ပေ စလောင်း card လိုသေးလားခင်ဗျာ...receiver + စလောင်းပဲလိုတာလား:106:
ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာတော့ Free Internet တဲ့ နောက်ပိုင်း ဘယ်လိုတွေများဖြစ်ပြီး Clone SIM တွေ၊ Movie5တွေဖြစ်ကုန်ရတာတုန်း။:106::106::106:
လုပ်ပါဦး Free Internet ကိစ္စလေးဆက်ဆွေးနွေးကြပါဦး။ Wireless WEP Key Password Spy လေးက တော့ သော့ကြီးခတ်ထားတာတောင် Unsecure လို့ပြောနေတယ်။ တကယ်ချိတ်လိုက် ပြန်တော့လည်း Key တောင်းနေတယ်။ ရှင်းပေးကြပါဦး။
key တွေတော. တွေတယ် ...ချိတ်တာမရဘူး...signal strength က good တယ်..
status က limited or no connected ဖြစ်နေတယ်...:2:
ပညာရှင်မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ All free ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ထားလို့ပါ။ Free Internet အကြောင်းက complain တွေလာမှ ဆက်လက်ဆွေနွေးလို့ ရမှာပါ။ noor ရဲ့ အခက်အခဲလေးကို တဆိတ်လောက် အသေးစိတ်ပြောပြနိုင်ရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ၀ိုင်းကြ၀န်းကြတာပေါ့။ ဟုတ်ဖူးလား။
ဒါ့ကြောင့် ups တစ်ခု လိုတယ်လို့ပြောထားတာပါ။
မိုက်တာပေါ့။ ချိတ်တာမရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ရှင်းပြပါလား။\_:d/
Family Entertainment is testing free
You need KU LNB, 2' or 8' dish & any receiver
ှSim Clone လေး သိချင်ပါတယ် တစ်စိတ်လောက်ပြောပြ ပေးပါပါလား ဂျာ...ဟိဟိ..
Like you said I use wireless key viewer and then I typed WEP keys in the box and trying to connect to the available network. but can't get connection though..:((
wahaha wrote: »
I only have family entertainment box and card and I only bought int'l channels. Is thereaway for me to get free5movies ? thanks !:)
ဟုတ်ကဲခင်ဗျာ။ Sim Clone ကိုလုပ်ဖို့က Electrical Circuit ဆိုင်ရာ Knowledge တော့ရှိမှရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Card reader/writer က ပြင်တွင်းကို တရား၀င်သွင်ယူခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်ဘဲ Hack လုပ်ရမှာပါ။ အဲဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် email နဲ့ ပို့ပေးပါ့မယ်။ project ကိုလဲ ဒီForum မှာတင်ပေးပါ့မယ်။
အဲရာတော့ ရှာလိုက်ဖွေလိုက်၊ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ ရပြီဆိုရင် ပြောပါ့မယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျို့..စောင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်...မြန်မြန်ရှာ မြန်မြန်စမ်း...မြန်မြန်ေ၀မျှပေးပါနော်...နောက်ကျနေယင် နောက်ကကြီးပဲ လိုက်နေရမှာမို့...free ဆို လာထား...:D:D:D:D:D
ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားထားကြပါဗျို့. . .အားပေးနေပါတယ်. . . စောင့်ကြည့်ဖတ်ရှု့နေပါတယ်
ကျွန်တော်ကလည်း Free တာရမယ်ဆိုလို့ကတော့ အာကာသကိုတောင်မှ အလည်သွားချင်ပါတယ်။
where are you try? Are you know you connected point (Point Name)? If you ok, send me this by PM coz of security for you. Right!:))
E/C အတွေ့အကြုံရှိမယ်ဆိုရင်တော့ hardware hacking လေးတွေပြောပြဖို့ရှိပါတယ်။ E/C တင်မရသေးဘူးနော် programming knowledge လဲရှိရမယ်။ ဥပမာ - MP4 ကို နက်ခ်၀က်ချိတ်ပြီး PC ကဲ့သို့ အသုံးပြုနည်း။ MP4 နဲ့ Home Projector ပြုလုပ်နည်း။ PC control wireless robotic တို့ စသည့်ပေါ့။
ကျနော်လုပ်ပုံကိုအရင်ပြေမယ်နော်။ Linksys USB Adapter လေးကိုကွန်ပျူတာမှာ တတ်ပြီး Driver Install လုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ရဲ့ ညာဖက်အောက်နာလေးမှာ Network Icon လေးကို Right Click ==> View Wireless Network ကို နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သော့ခတ်ထားတဲ့ပုံလေးတွွေသုံးခုလောက်တွေပါတယ်။ အဲ့ဒါကို Double Click(connect) လုပ်လိုက်ရင် Key တောင်းပါတယ်။ မရမချင်းမချိတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ wireless key view လေးကို install လုပ်ပြီး သူ့မှာပါတဲ့ Fine Key ဆိုလာဘာလာမသိဘူးနှိပ်လိုက်တော့ ခုနကမြင်ရတဲ့ သုံးခုလောက်နဲဲ့ Unsecure [No Key]ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျနော်အဆင်မပြေတာက အဲ့ဒီမှာ တကယ်တမ်း Key ကထွက်မလာတော့ ဆက်သွားလို့မရတော့ ပါဘူး။ အဲ့ဒါကျနော့်အခက်အခဲပါ။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရင်ရနိုင်မလဲ ပြောပေးပါ။
အဲဒါဆိုရင် key နေရာမှာ blank ထားပြီးလုပ်ကြည့်ပေါ့။ မရရင် 1f2f3f4f5f နဲ့ စမ်းကြည့်ပါဦး။ နောက်ဆုံးအဆင့်က အဲဒီ့ဆိုင်ကိုသွားပြီး hack လိုက်ပေါ့။
ကျွန်တော့ဆီကိုလဲမေးပို့ပေးပါလားခင်ဗျာ အောက်ကမေးကိုပို့လို့ရပါတယ်။ :d
ဟုတ်ကဲ့။ မနက်ဖြန်ပို့လိုက်ပါ့မယ်။ ဒီနေ့တော့ diagram တွေပါမလာလို့ပါ။:D
bro ရေ...၀ယ်ရမယ်. USB wifi adapter အမျိုးစားနဲ့...စျေးသိချင်တယ်...
ရှိတဲ. Kyats လေးနဲ့အ၀ယ်မှားမှာစိုးလို့......
plz reply me quick:D
nariyo wrote: »
wifi အမျိုးအစားကတော့ g type ပါ။ brand ကတော့ အဆင်ပြေတာသုံးနိုင်ပါတယ်။ မ၀ယ်ခင် specification အရင်လေ့လာပါ။
princeakarit ရေကျနော့်လဲလိုချင်ပါတယ်ဗျာ hack ချင်တာထက် နည်းပညာတခုအနေနဲ့ လေ့လာချင်တာပါ၊ ကျနော့် mail ကတော့ [email protected] ပါ
အဲ့သလိုကြီးလား? Wireless Key View ကရတယ်ဆို။ ပြီးတော့ ဆိုင်ဘာဆိုင်ကနေမိနေတာပေါ့။ ကိုprinceakarit ပြောနေတာက ဘယ်က ကွန်နက်ရှင်ကိုလှမ်းချိတ်ရမှာတုန်း အခုတော့ အဲ့သလိုတွေ ပဲရတော့မပေါ့။ နောက်ဆုံး အဲ့ဒီဆိုင်ကိုသွားပြီး အဲ့ဒီကီးကို ဘယ်လို Hack ရမှာတုန်း ပြောပါဦး အမြန်လေး။ ဆန့်တငင့်ငင့်ကြီးဖြစ်နေလို့:D:D:))
ပြောရမှာတော့ ဆရာ့ ဆရာ Hacker ကြီးများကိုလည်း ဂရုစိုက်ရသေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပြောမတော်လို့ ၀ိုင်းသမလိုက်မှ ဒီနေရာလေးတောင် လာဖို့ခက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ PM ဘဲပို့ထားလိုက်ပါ့မယ်။ တစ်ခုတော့ သတိပြုပေးပါ။ ကျနော် Hacker မဟုတ်ပါ။ researcher တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။
zelpha wrote: »
ဟုတ်ကဲ့ပို့လိုက်ပါမယ်။ စမ်းသပ်ပြီးရင်လဲ အဖြေလေးတွေကို reply ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ Complain ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေရာမှာ ပြန်ရေးပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ :68:
MZ member တစ်ဦး PM ပို့ မေးထားတဲ့ ဟာလေးတွေကို ဒီနေရာမှာပါဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအတွက် အသုံး၀င်မယ် ထင်လို့ပါ။
ဂိုထောင်က အရမ်းမြင့်နေပါလား။ သွပ်မိုးတွေ မိုးထားတယ်။
အဲဒီလိုဆိုရင်လည်း Theory အရတော့ ရပါတယ်။ သစ်ပင် သစ်တောကိုဘဲ wifi ကကြောက်တာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ သွပ်မိုးနဲ့ ေ၀းေ၀းထားနိုင်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သွပ်မိုးက Radio Frequency ကို တားဆီးနိုင်လို့ပါ။5V ပေးရတယ်ဆိုတာကတော့ Circuit Diagram နဲ့ ဆွဲပြမှအဆင်ပြေမှာပါ။ အကြမ်းတော့ပြောပြပါ့မယ်။ USB System မှာ ကြိုး4ချောင်းရှိပါတယ်။
color ကတော့ အလွတ်မရဘူး
1 က +5V
2 က Data +
3 က Data -
4 က - 0V (Ground)
အခုတွေ့ရတဲ့ +5V နဲ့ -0V ကို5V Power supply နဲ့ ဆက်ပေးပြီး5V ပေးတာပါ။ Adapter နဲ့ Connector တွေကိုတော့ မိုးရေမစိုအောင် ထားရမှာပေါ့။ Adapter ကို C-Plus ဘူးလို ဘူးအကြည်နဲ့စွတ်ထားရမှာ။ ကောင်းတာက ဇကာကို ဒီအတိုင်းမထားဘဲ ရောင်ပြန် ငွေရောင်တွေကပ်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
wifi hack ကိုဖြန့်ပီးတော့ ပြန်ဖြေမှ သင့်တော်မှာပေါ့။
Cisco Network Magic ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ အတော်ကောင်းတယ်။ Connection တစ်ခု၀င်လာပီဆိုရင် alarm ပြတယ်ဗျ။:67:
တင်ပေးဖို့ကတော့ Upload speed က 168 bytes/s တဲ့ မလွယ်ဘူး။ ဟူး...... ကွန်နက်ရှင်ရယ်။
စိတ်ပျက်ရပါ့လား။ အော် ..........မှာ လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက်ခနော်
ကျွန်တော်ခု BELKIN က usb adapter လေးသွား၀ယ်ထားတယ်...33$ကြီးတောင်:D
အရင်...68*30 တောင့် မှာ လိုင်းမိတယ်ကြားလို့...nekword 10meter ကြိုးကမ၀ယ်သေးဘူး..
aithoz wrote: »
စလောင်းမပါဘဲနဲ့တော့ ရမယ်လို့ အသေအချာမပြောနိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ စလောင်းက ဦးတည်ရာကို ရည်ရွယ်ပြီး Radio Frequency Reflection သဘောပါ။
Network trace ကိုညွန်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျား။
Bus ကား free စိးနည်း
ကဲ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေသလဲ :P
Wifi ကို Hack ပြီး Internet ကို Free သုံးချင်တဲ့သူများ
Download ပိုးစိုးပက်စက် ဆွဲချင်ပေမဲ့ Connection မကောင်းလို့ အခက်တွေ့နေသူများ
Game တွေကစားရာမှာ speed နှေးနေလို့ စိတ်ရှုပ်နေသူများ
software လေးတစ်ခု လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်
သူ့နာမည်က speederXP တဲ့
ဒီနေရာကယူလို့ရပါတယ်။ အကြိမ်အရေအတွက်နဲ့ Limited လုပ်ထားပါတယ်။
သူ့ Home Page မှာတော့ ဒီလိုညွှန်းထားတယ်ဗျ။
"SpeederXP isapowerful PC speed hack tool. You can speed up your computer, your internet access and your games. Make your old slow computer more efficient and run faster in games."
keygen တော့မပါဘူးဗျ အဲဒီ့အစား loader လေးတော့ရှိတယ် စမ်းသပ်သုံးပြီး
အဆင်ပြေလို့ ဆက်လက်သုံးဆွဲချင်ရင်တော့ Limited အကြိမ်အရေအတွက် မကုန်ခင် Loader လေးနဲ့ RUN ပါ။
ကျနော့်အထင် Hardware ကို (CPU+Memory) ထိခိုက်နိုင်မလားဘဲ
Hight Speed တင်လိုက်ရင် တော်တော်လေးကိုမြန်တယ်
web page တွေမှာပါတဲ့ animation တွေဆို ဖလမ်းဖလမ်းထနေတော့တာပါဘဲ
Connection တွေဆို မြန်လိုက်တာ ၀ီကိုခေါ်နေတော့တာ
အဲဒီလောက်ကောင်းနေတော့ အခြား ဆိုးကျီိုးတွေတော့ရှိမယ်ထင်တယ်။
ကျနော်တော့ တစ်ခါတလေ restart ကျ ကျသွားတယ်။ :P
1) Task Manager ခေါ် process တွေကို end process tree နဲ့ လိုက်ဖြုတ်
2) My Computer -> Tool -> Folder Options.. -> View -> Hide Protected Operating System file ဆိုတာကို Uncheck ဖြုတ်, 10 sec လား 15 sec လား အချိန်ရမယ်နော်..
3) C:\_ နဲ့ \_ အောက်မှာ msconfig.pif ဆိုတာ ရှိတယ်.. delete လုပ်..
4) C:\_ အောက်က autorun.inf နဲ့ AUTOEXEC.bat ဆိုတာတွေကို delete လုပ်ပါ။
autorun.inf က virus ကို registry ထဲမှာ လမ်းကြောင်း သွား create လုပ်ပေးနေတယ်။ process ထုတ်ပေးတယ်။ delete လုပ်ရင် မရအောင်လို့ပေါ့။ Autoexec.bat က system32 ထဲက <<~ ဆိုတာကို သွား စက်တက်တက်ချင်းမှာ run ပေးတယ်။
5) C:\_Windows\_System32\_ အောက်က <<~ ဆိုတာ .~>> extension နဲ့ hide ဖြစ်နေတာလေးလည်း ရှိမယ် delete လုပ်, 珇.~ ဆိုတာလေးပါတွေ့ရင် ကစ်..
6) System32 အောက်က အောက်ပါ file တွေကို delete လုပ်ပါ
cdplayer.exe.manifest, ncpa.cpl.manifest, sapi.cpl.manifest, WindowsLogon.manifest ဆိုတာတွေပါ။ ဘာမှန်းမသိရပေမဲ့ ဆက်စပ်တယ်လို့ သံသယ ရှိရပါတယ်။
7) Registry ထဲ၀င်ပြီး msconfig.pif ဆိုတာကို ရှာပါ..။ autorun ဖိုင်လေးတွေ ကို ပြန် create လုပ်ဖို့ အထောက်အပံ့ ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
Note: system32 အောက်မှာ windows က သူနဲ့ ပက်သက်တာတွေကို ဘာမှ hide လုပ်မထားတတ်ပါ။ ထို့ ကြောင့် system32 အောက်တွင် hide ဖြစ်နေသော file များမှာ မသင်္ကစရာများဟု ယူဆလိုက်ပါတယ်။
rapidshare ကနေ download ဆွဲလို့ရတဲ့နည်းလေးဗျ။
Mozilla FireFox နဲ့ဖွင့်ပါတယ်။
Internet Download Manager (Portable) လေးနဲ့ link လုပ်ထားပါတယ်။
IP address ကို Hide လုပ်တဲ့ Program လေးသုံးထားပါတယ်။
Firewall off ထာပါတယ်
C:\_Documents and Settings\_xxxxxxx\_Cookies ထဲက တွေ့သမျှ အားလုံးဖျက်ပြစ်ထားပါတယ် (index.dat မပါ။ ဖျက်လို့မရပါ)
ဒါဆိုရင် OK ပါတယ်။
စမ်းကြည့်ပါ။ မရရင်ပြောပါ။ :101:
Free Internet ဆိုတဲ့ Title နဲ့ ကိုက်ညီအောင်
Internet ကနေ free ရသမျှတွေအကုန်လုံး ေ၀မျှကြပါ )
ဟုတ်ကဲ..ကျနော် လဲ အ ထက်က တယောက် ပြေါသလိုဘဲ ခင်ဗျ...
Home နားက cafe နဲ့ချိတ်မိတာဘာ...ကျနောကတော.ဘာ Adapter မှမသုံးဘာဘူး..
MSI U 100 notebook လေးနဲ့သုံးတာဘာ... ">
ပုံေှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ပါပဲ ခင်ဗျား..ချိတ်ပေ မဲ့ မရ ဘူးခင်ဗျ..WEB key က အိုကေ တယ်...ဘာတွေ ထပ်ပြီး လိုသေး လဲ ဆိုတာဆွေ:နွေ: ပေး ကြပါ....
ကျနော် လည်: သိပ်နား မလည် လဲ လို.မရှင်း ပြတတ်ဘူးခင်ဗျား...
ဘာတွေ လို အပ်တယ် ဆိုတာ လမ်းညွန် ကြပါခင်ဗျာ....ကျေးဇူး တင်ပါ သည်.
အဲဒါဆိုရင် key နေရာမှာ blank ထားပြီးလုပ်ကြည့်ပေါ့။ မရရင် 1f2f3f4f5f နဲ့ စမ်းကြည့်ပါဦး။ နောက်ဆုံးအဆင့်က အဲဒီ့ဆိုင်ကိုသွားပြီး hack လိုက်ပေါ့။ [/QUOTE
windows က wait ခိုင်းပြီးတော့ ဘာဆက်ဖြစ်သေးလဲ။ မမိဘူးဖြစ်နေတာလား။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် connection ကကောင်းတာဘဲ။ ကျနော်ဆီမှာ3တုံးဘဲမိတယ်။ ) )